सरकारद्वारा एकाएक सं'कटकाल घोषणा, दियो यस्तो कारण - Prateek Nepal
सरकारद्वारा एकाएक सं’कटकाल घोषणा, दियो यस्तो कारण
क्वालालम्पुर । कोरोना भाइरसको म’हामारी रोक्नका लागि मलेसियाले सं’कटकाल घोषणा गरेको छ। मंगलबार प्रधानमन्त्री मुहयिदिन यासिनको सिफारिसमा राजा अल सुल्तान अब्दुल्लाले सं’कटकाल घोषणा गरेका हुन्। यो संकटकाल कोरोनाको अवस्था हेरेर १ अगस्टसम्म वा त्यसभन्दा अघि नै खुकुलो पनि हुनसक्ने दरबार स्रोतले जनाएको छ।
सं’कटकाल घोषणाको अर्थ कानूनत संसद् स्वतः निलम्बन हुनेछ। र, प्रधानमन्त्री यासिनले आफ्नै ढंगले सरकार सञ्चालन गर्ने सामथ्र्य राख्नेछन्। सोमबारसम्म यासिनले सं’कटकालको कुनै सं’केतसम्म पनि गरेका थिएनन्। त्यसैले, राजनीतिक वृत्तमा यो निर्णयले ठूलो झ’ट्का दिएको छ।
‘यो कदमले जनताको व्यक्तिगत सुरक्षा र देशको चासोलाई पनि सम्बोधन गरेको छ। पछिल्लो कोभिड १९ तथ्याङ्कलाई समेत आधार मानेर यो निर्णय लिइएको हो,’ राजदरबारद्धारा मंगलबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। राजा र प्रधानमन्त्रीबीच सोमबार साँझ भेटघाट भएको पनि विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।
यासिनले यसअघि गत अक्टुबरमा सं’कटकाल लगाउन सिफारिस गरेपनि तत्कालीन समय राजाले यस कदमलाई अस्विकार गरिदिएका थिए। त्यतिबेला संसद्मा आफ्नो नेतृत्वमाथि आइलागेको चुनौतीबाट भाग्नका लागि यासिनले स्वास्थ संकटको दुरुपयोग गर्न खोजेको आरोप विपक्षीहरुले लगाएका थिए।
यद्यपी, पछिल्लो समय मलेसियामा दैनिक २ हजारभन्दा धेरैमा सं’क्रमण देखिएको छ । मलेसियामा कुल १ लाख ३८ हजारभन्दा धेरैमा कोरोना सं’क्रमण छ। मलेसियाका पछिल्लोपटक १९६९ मा सं’कटकाल घोषणा भएको थियो, जतिबेला साम्प्रदायिक दंगाका क्रममा देशको राजधानी शहरमा सयौंको ज्या’न गएको थियो। लु’टपाट समेत बढेको थियो।
यस्तै यता जापान सरकारले हालैका दिनमा राजधानी टोकियोमा कोभिडका कारणले लगाएको सं’कटकालको अवस्थालाई थप विस्तार गर्ने भएको छ । जापानी प्रधानमन्त्री योशिहिदे सुगाले सो सं’कटकालको क्षेत्र बढाउने विषयमा तयारी थालेको पनि यहाँका अधिकारीहरुले जानकारी गराएका छन् ।
हाल जापान सरकारले यस्तो प्रकारको सं’कटकाल जापानको राजधानी टोकियोमा लगाउँदै आएको छ । तर सो क्षेत्रलाई अझ विस्तार गरिने तयारी जापानका प्रधानमन्त्री सुगाले गरेको राजधानी टोकियोबाट प्राप्त भएको समाचारमा जनाइएको छ ।
टोकियोबाट प्राप्त भएको समाचारमा सो सं’कटकाल जापानको राजधानी टोकियो बाहेकका क्षेत्रहरु जस्तो ओसाका, क्योटो र ह्योगोसम्म पनि विस्तार गर्न सकिने भएको हो । जापान सरकारले गएको शुक्रबारदेखि राजधानी टोकियोमा यो संकटकाल लगाएको थियो । तर सो संकटकालीन क्षेत्रलाई थप विस्तार गरेर अरु क्षेत्रमा पनि पुर्‍याइने भएको हो ।
ती क्षेत्रहरुमा आफूले सं’कटकालीन अवस्थालाई बढाउने विषयमा तयारी गरिरहेको जानकारी प्रधानमन्त्री सुगाले आफ्नो दल लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, एलडिपीलाई पनि गराएको समाचारमा जनाइएको छ ।
जापान सरकारले राजधानी टोकियोसहितका यसको वरपर रहेका अरु तीन ओटा प्रिफेक्चरहरु चिबा, कानागावा र साइतामामा पनि सं’कटकालको घोषणा गरेको थियो । यसपछि जापानको सरकारले यहाँका अरु प्रिफेक्चरमा पनि यो संकटकालीन अवस्था बढाउने तयारी थालेको समाचार यसअघि नै अएको थियो ।
खासगरी सुरू सुरूमा जापानको राजधानी टोकियोमा मात्र देखिएको कोरोना भाइरसको सं’क्रमण यस बाहेकका बाहिरका क्षेत्रमा पनि देखिन थालेपछि पछिल्ला दिनहरुमा आएर जापानले यस्तो नीति लिएको हो ।
अहिले जापानका प्रायः पश्चिमी प्रिफेक्चरहरुमा यसको प्रकोप बढ्दै गएको छ । जसका कारण जापान सरकारले ती क्षेत्रमा आवश्यक सहायताका प्याकेजहरुको समेत घो’षणा गरी सं’कटकालको घो’षणा गरेको हो ।
‘सूर्य’ चिन्ह र ‘नेकपा’ नाम ह’त्याउन प्रधानमन्त्री ओली हात धोएरै उत्रिए मैदानमा, यतिसम्म गरेको खुलासा भएपछि प्रचण्ड–नेपाल समूह तनावमा !
ओलीले देशैभर यस्तो तहल्का मच्चाउने गोप्य काम गरेको खुलासा !
थानकोट-सिस्नेखोला सुरुङमार्ग निर्माण सुरु
September 8, 2020 September 8, 2020 Ramash kunwar
पहिरोले पु’रिएर पाँच मजदुरको मृ’त्यु
र’क्सीले मा’तेर प्रहरी कु’ट्नेहरू राजनीतिक द’बाबमा छुटे घर पुर्‍याउन गयो यसरी मेयरको टोली
August 29, 2020 August 29, 2020 Ramash kunwar